तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि अत्यधिक खतरनाक रहेका १० घर बोटबिरुवाहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B10B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 20, 2021 पल वेगम्यान ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
Amaryllis दुबै बिराला र कुकुरलाई धेरै विषाक्त छ।
क्याक्टस त्यति विषाक्त छैन जति यो खतरनाक छ।
होस्टस एक बोटबिरुवा हुन् जब यो बगैंचामा आउँदछ तर ती दुबै बिराला र कुकुरहरूका लागि अति विषाक्त छन्।
बोटबिरुवाले हाम्रो जीवनमा मात्र होइन तर हाम्रो प्रिय पाल्तु जनावरहरूको जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। उनीहरूले संसारमा बढी हरियाली ल्याउन, वायु प्रदूषक पदार्थ घटाउन, र हाम्रो समग्र जीवनस्तर वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ। र यस कारणले गर्दा, प्राय जसो पाल्तु जनावर आमाबाबुले तपाईंको घरमा घर बिरूवाहरू हुनु पर्छ। तर दुर्भाग्यवस, हरेक घरको बोट सुरक्षित छैन। त्यहाँ केहि छन् विषाक्त र तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि अत्यन्त हानिकारक। तिनीहरू कुन हुन्? खैर, हामी ती मध्येका १० हेर्नेछौं!
# १ घ्यु कुमारी
धेरै मानिसहरूसँग विभिन्न कस्मेटिक र औषधीय प्रयोगहरूको लागि एलोवेरा बोटहरू हुन्छन्। र जब यो मानवहरूको लागि ठूलो हो, यो तपाईंको पाल्तु जनावरहरू जस्तै बिरालाहरू र कुकुरहरूको लागि त्यति धेरै हुँदैन।
यसबाहेक, यदि यस्ता बोटबिरुवाहरू तपाईंको घरपालुवा जनावरले खपत गरेमा यसले बान्ता र पखाला हुन सक्छ। यसैले, तपाईं या त यी बिरूवाहरूसँग टाढा गर्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूलाई तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्छ।
# २ Amaryllis
यस्ता बोटबिरुवाहरू प्राय: घर सुधार भण्डारहरूमा पाइन्छन् र प्राय: बगैंचामा। तर दुःखको कुरा, एरमेलिस दुबै बिराला र कुकुरका लागि अत्यन्तै विषाक्त छ।
यसले कम्पन, अत्यधिक drooling, सास फेर्न कठिनाइ, र बान्ता र पखाला सहित पेट समस्या हुन सक्छ। त्यसैले प्रयास गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको घरपालुवा जनावरबाट टाढा राख्नुहोस्।
घरका अरू बोटबिरुवाहरू भन्दा, क्याक्टस त्यति विषाक्त हुँदैन जति यो खतरनाक छ। निश्चित छ, तपाईंको कुकुर वा बिरालोले त्यस्तो बोटबिरुवाहरूसँग कुचोल्ने प्रयास गर्दैनन् जसमा काँडा र स्पाइकहरू छन्। तर तपाईलाई कहिले थाहा छैन।
केही घरपालुवा जनावर जिज्ञासु र कुख्यात हुन्छन् र यस्ता बोटबिरुवाको नजिक जान्छन्। तसर्थ, गर्न सक्ने समझदार कुरा भनेको त्यस्ता बोटहरू घरमा राख्नु हुँदैन विशेष गरी घरपालुवा जनावरहरूसँग।
#।। क्यास्टर बीन
अधिक सामान्य रूपमा क्यास्टर-तेल प्लान्टको रूपमा परिचित छ, त्यस्ता बोटहरू लोकप्रिय बगैंचाको छनौट हुन् विशेष गरी सार्वजनिक बगैंचामा, र धेरैलाई यी रंगीन बोटहरू मनपर्दछ।
तर दुर्भाग्यवस, यी बोटहरू तपाईंको घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्यको लागि विषाक्त छन् र तिनीहरूलाई यथासम्भव टाढा राख्नु राम्रो हुन्छ।
साइक्लेमेन एक धेरै लोकप्रिय घर बोट हो र तिनीहरूले वातावरण सुपर रंगीन र गुलाबी बनाउँछ। तर ती घरपालुवा जनावरबाट टाढा राख्नुपर्दछ किनकि यदि ती इन्जेस्टेड छन् भने तिनीहरू विषाक्त छन्।
यसबाहेक, त्यस्ता बोटहरूले घरपालुवा जनावरहरूमा गम्भीर बान्ता गर्न सक्छ र केही दुर्लभ मामिलाहरूमा पनि, जीवन गुमाउने गर्दछ।
#।। हात्तीको कान
एलिफन्ट इयर बोटलाई न्यानो मौसममा सजिलैसँग हुर्कन सकिन्छ, तर अन्य यो पनि यो प्रायः भागहरूमा साझा घर बोट हो। तिनीहरू आँखामा सुन्दर देखिन्छन्, तर दुःखको कुरा, ती सबै चमकहरू सुन होइनन्।
यी बोटबिरुवाहरू घरपालुवा जनावरहरूका लागि हानिकारक हुन्छन् र यसले मुख क्षेत्र, बान्ता, र पखालामा मात्र होइन तर जनावरहरूमा पखाला पलाउन सक्छ। अब त्यस्ता बोटहरूलाई खाडीमा राख्नको लागि पर्याप्त कारण छ।
यसैले, यदि तपाइँको घरमा एक जिज्ञासु चार-खुट्टे साथी छ भने, होस्ट्टा बिरूवा रोप्नु भनेको चलाख कुरा गर्नु हुँदैन।
यदि तपाईं लिलीमा हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं केवल वाहमा जानुहुन्छ। तर त्यस्ता सुन्दर बोटहरू भए पनि, ती तपाईका घरपालुवा जनावरहरूको लागि पूर्ण हानिकारक छन्।
र केही प्रकारका लिलीहरू विषाक्त पनि हुन्छन् र घरपालुवा जनावरको साथसाथै मिर्गौलामा विफलता, र दुर्लभ मामिलाहरूमा, ज्यान गुमाउन सक्छ।
#।। बिहानको महिमा
बिहानको महिमाका केहि प्रजातिहरूमा बीज हुन्छन् जसमा एसिड हुन्छ, जो लाइजरजिक एसिडको रूपमा चिनिन्छ, जुन एलएसडीको एक प्राकृतिक रूप हो। यो घरपालुवा जनावरहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छ (मुख्य रूपमा बिराला र कुकुर) र भ्रम, विस्थापन, कंप, र जठरांत्र मुद्दाहरूको कारण हुन सक्छ।
यसैले, तपाईका घरपालुवा जनावरहरू छन् भने तपाईका घरहरूमा यी बोटबिरुवाहरू राख्नु उत्तम हुँदैन।
# १० फिलोडेंड्रोन
यी बोटहरूमा ठूला पातहरू छन् र सायद तपाईको घरका लागि उपयुक्त छन्। तर यदि तपाईं सँगै घरपालुवा जनावर छ भने, तब तपाईंले यी बिरूवाहरू प्राप्त गर्नेबारे पुन: विचार गर्नुपर्दछ। फिलोडेंड्रोन बिरूवाहरू हल्का विषाक्त हुन्छन् र यदि घिरेमा यसले केही क्लिनिकल समस्याहरू निम्त्याउँछ जस्तै मुख, ओठ र जिब्रोमा जलन, अत्यधिक झुकाव, बान्ता, र निल्नमा कठिनाईहरू।
जबकि यी केवल १० हो, त्यहाँ त्यहाँ अझ बढि बोटहरू छन् तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूलाई सम्भावित रूपमा विषाक्त। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो घरको लागि बिरूवा लिने निर्णय गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले बोटको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्नुभयो। सुरक्षित रहनुहोस्, र तपाईंको घरपालुवा जनावरहरू पनि सुरक्षित राख्नुहोस्!
सांप्रदायिक समाचार घरपालुवा जनावरहरूको लागि खतरनाक बोटबिरुवा पत्रु हेरचाह घरपालुवा स्वास्थ्य घरपालुवा जनावरहरुका लागी विषाक्त बिरुवाहरु
नमस्कार, म पावल वेगम्यान पालतू ट्रेनर हुँ, म सधैं घरपालुवा जनावरहरूले घेरेको छु। मेरो सबै जीवन, यो मेरो उद्देश्य केहि तरिका मा पशु कल्याण गर्न योगदान गर्न छ। र धन्यबाद, म मेरो सपना अनुसरण गर्न सक्षम थिए। अब, म स्वतन्त्र कुकुर प्रशिक्षक हुँ, पालतु जनावरहरुको अभिभावकलाई कुकुरहरुलाई एक विधिगत तरिकाले प्रशिक्षण दिन मद्दत गर्दै। यसका साथै, म विभिन्न वेबसाइटहरूको लागि सूचना ब्लगहरू र पाल्तु पशु प्रशिक्षण गाईडहरू पनि लेख्छु, जसमध्ये एक BestVetCare.com हो। म मेरो दर्शकहरूलाई तथ्यात्मक र सहयोगी सामग्री प्रदान गर्ने दिशामा प्रयासरत छु ताकि उनीहरू आफ्नो घरपालुवा जनावरहरूको हेरचाह गर्न सकून्।